Herin’ny lalàna fa tsy lalàn’ny hery… | NewsMada
Herin’ny lalàna fa tsy lalàn’ny hery…
Par Taratra sur 22/06/2020
Mitohy ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 amin’izao. Tsy misy tsy sahirana amin’ny fiatrehana ny fiainana andavanandro: mafy sy sarotra ny fitadiavana. Nefa misy, rey olona, ny malain-kisahirana, te hanan-karena vetivety… Tsy inona fa ireo mitetika hivelona amin’ny fanavaona asa ratsy sy asan-jiolahy ao anatin’izao fahamehana ara-pahasalamana izao.
Hanamarinan’ny sasany tena amin’izany ny hoe tsy maintsy mihinana, tsy maintsy mitady. Ny manana asa aza, hono, misy very asa, vao mainka ny tsy manana? Na ahoana na ahoana, na inona na inona, tsy misy azo anamarinana ny fandikan-dalàna. Rehefa lalàna dia lalàna, mila fanenjehana sy fanasaziana mandrakariva ny tsy fanarahan-dalàna, na iza na iza, na aiza na aiza.
Tato ho ato, misy etsy sy eroa, mba tsy hilazana hoe mirongatra, ny karazana vaky trano, ny fanendahana… Variana amin’ny ady amin’ny valanaretina Covid-19 ny maro? Tsy lavina, manao izay efany sy afany ny mpitandro filaminanana. Eo koa ny fiaraha-miasa amin’ny olona tsara sitrapo, anisan’ny ahombiazana amin’ny fisorohana asa ratsy sy ny fanenjehana olon-dratsy.
Na izany aza, misy ny tsy fahafaha-manoatra. Izay no mahatonga ny olon-dratsy sasany manjakazaka, sahy ratsy… Amin’izany, takina hatrany ny fampiharana ny herin’ny lalàna. Mba tsy ny lalàn’ny hery amin’ny afitsoky ny olon-dratsy no manjaka. Miara-dalana amin’izany ny fahatokisan’ny olom-pirenena ny fitondram-panjakana isan-tsehatra sy isan’ambaratonga.
Efa saika ela loatra sy lalina ary nahahenika ny sehatra sy ambaratonga rehetra ny gaboraraka amin’ny tsy fanarahan-dalàna tamin’ny fitondrana teo aloha. Toy izany koa ny kolikoly, ny firaisana tsikombakomba… Na izany aza, efa nisy ny fanarenana sy ny fanonerana. Mitady hirongatra indray izao ny asan-jiolahy sy ny asa ratsy noho ny fahasahiranana eny ifotony.
Vitan’ny fampiharan-dalàna fotsiny ve? Eo koa ny fanarenana sosialy, toekarena; eny, politika aza. Soa ihany, efa hiroso amin’izany ny fitondram-panjakana: ho hita eo…